တင့်တင့်ထွန်း | Myanmar Mp3 Album
Home / Myanmar Artist / အဆိုတော် (မ) / တင့်တင့်ထွန်း
Category Archives: တင့်တင့်ထွန်း
Tint Tint Htun
ရေပျော်ငှက်တို့ရင်ခုန်သံ – ၂
၁။ လမင်းလေး – R ဇာနည် ၂။ ဝေးနေချိန် – တင့်တင့်ထွန်း ၃။ စိတ်ချချင်တယ် – အီတိုး ၄။ အချစ်မရှိ နေ့ရက်များ – တင်ဇာမော် ၅။ မင်းရဲ့ အချစ်နဲ့ – Examplez ၆။ မင်းလေးချစ်တတ်ရင် – မျိုးကျော့မြိုင် ၇။ ခြောက်ခမ်းသွားသော အိပ်မက်မြစ် – ဇော်ဝင်းထွဋ် ၈။ ရေပျော်ငှက်များ – Group သီချင်းဒေါင်းရန်
October 16, 2010 htoo htoo အီတိုး အဆိုတော် (ကျား) အဆိုတော် (မ) အခွေ (အများ) ဇော်ဝင်းထွဋ် တင့်တင့်ထွန်း တင်ဇာမော် မျိုးကျော့မြိုင် Example Media Myanmar Artist Rဇာနည် 1 Comment
ကောင်းဘွိုင် ချစ်သူများ (Vol 1)
September 20, 2010 shwewarmyay ဘိုဘိုဟန် ဘရိတ်ကီ ဖိုးကာ ဗစ်တာခင်ညို အခွေ (အများ) ရင်ဂို ဖြူဖြူကျော်သိန်း ဆုန်သင်းပါရ် တင့်တင့်ထွန်း သျှားအိဘိုဘိုဟန် Rဇာနည် နန်းအေးသာ 1 Comment
ကျောင်းသီချင်းများစုစည်းမှု – ၂
၁။ သီချင်းဧည့်သည် အေးချမ်းမေ ၂။ ပြန်ဆုံနိုင်ပါ့မလား ထွန်းအိဒြာဗို ၃။ ပြန်မယ်ပြန်မယ် တင်ဇာမော် ၄။ မာလာဆောင်မောင်မလာ နော်လီဇာ ၅။ ကျောင်းဖွင့်ချိန် ချောစုခင် ၆။ ဒီအချိန်ဆို ဆုန်သင်းပါရ် ၇။ ကျောင်းဖွင့်ချိန် အေးချမ်းမေ ၈။ ပုဂံလမ်း တင့်တင့်ထွန်း ၉။ သီချင်းဧည့်သည် အဲလက်စ် ၊ ဆုန်သင်းပါရ် ၁၀။ နှုတ်ဆက်သူ ဟေမာနေ၀င်း
May 19, 2010 kogyithet အဆိုတော် (အဖွဲ့) အဆိုတော် (ကျား) အဆိုတော် (မ) အခွေ (အများ) အဲလက်စ် ထွန်းအိန္ဒြာဗို ဆုန်သင်းပါရ် အေးချမ်းမေ နော်လီဇာ ချောစုခင် ဟေမာနေ၀င်း တင့်တင့်ထွန်း တင်ဇာမော် Myanmar Artist အဲလက်စ် ထွန်းအိဒြာဗို ဆုန်သင်းပါရ် အေးချမ်းမေ နော်လီဇာ ကျောင်းသီချင်းများစုစည်းမှု - ၂ ချောစုခင် ဟေမာနေ၀င်း တင့်တင့်ထွန်း တင်ဇာမော်6Comments
၀၁ မူယာ ၀၂ နှလုံးသွေးများရပ်တန့် သွားပါစေချစ်နေမယ် ၀၃ ဘောလုံးစီးခရီးသွားမည့်သူများ ၀၄ ကြိုးပုခက်၌ညိတွယ်ခြင်း ၀၅ အသည်းကွဲမြို့ ရှုခင်း ၀၆ ဟုတ်တယ်ဟုတ် ၀၇ ပြန်လာပါတော့ ၀၈ တကယ်ပြောတာပါ ၀၉ ဝေးများဝေးရင် ၁၀ မျော်လင့်ဆဲပါအချစ်ရယ် ၁၁ ဒါလေးများ ၁၂ တမ်းတမ်းစွဲ
March 24, 2010 mmsong အခွေ (အများ) ဂျက်မြသောင်း ဆုန်သင်းပါရ် လေးဖြူ တင့်တင့်ထွန်း New Myanmar Albums5Comments
၁. ဇော်ဝင်းထွဋ် – မြတ်နိုးခြင်းနှင်းဆီ ၂. တင့်တင့်ထွန်း – လောကကျောင်းရဲ့အချစ်ဖတ်စာ ၃. ဂျီလတ် – ချစ်သူဆီ ၄. တင်ဇာမော် – ရင်ခွင်အချစ်ဦး ၅. Rဇာနည် – မုန်းဖို့မေးနေသူ ၆. ဇော်ဝင်းထွဋ် – မျက်နှာများတဲ့ကောင်းကင် ၇. တင့်တင့်ထွန်း – မျက်ရည်စိုတဲ့အပြုံး ၈. ဂျီလတ်, တင်ဇာမော် – အဆိပ် ၉. တင်ဇာမော် – လက်ဆောင် ၁၀. ဇော်ဝင်းထွဋ် – မြတ်နိုးခြင်းနှင်းဆီ
July 10, 2009 Mad Computerist အဆိုတော် (ကျား) အဆိုတော် (မ) အခွေ (အများ) ဂျီလတ် ဇော်ဝင်းထွဋ် တင့်တင့်ထွန်း တင်ဇာမော် Myanmar Artist Rဇာနည်4Comments
၀၁။ ပေါက်နေပြီ – ဆုန်သင်းပါ ၀၂။ မင်းကြောင့် – ခင်ဘုဏ်း ၀၃။ တစ်ခါက Rock and Roll – ချောစုခင် ၀၄။ အဝေးကသီချင်း – တင့်တင့်ထွန်း ၀၅။ ပြန်သိမ်းထားမယ် – ငယ်ငယ် ၀၆။ ကမ်းစပ်ကခြေရာများ – Emperor ၀၇။ သဘာဝရဲ့ ရင်သွေးငယ် – Lazy Club ၀၈။ ဒီလိုအချိန် – ရှင်ဖုန်း ၀၉။ ထားခဲ့မယ့်ချစ်သူ – မီးမီးခဲ ၁၀။ ကမ်းစပ်နဲ့ရေလှိုင်း – တင်ဇာမော် ၁၁။ နှလုံးသားအနက် – ကော်နီ ၁၂။ အရိပ် – ယုဇန
April 28, 2009 Snuo Mwoani ရှင်ဖုန်း ငယ်ငယ် ဆုန်သင်းပါရ် ကော်နီ ချောစုခင် ခင်ဘုဏ်း တင့်တင့်ထွန်း တင်ဇာမော် ယုဇန မီးမီးခဲ Leaveacomment
၀၁။ နွေဦးဝေဒနာ ၀၂။ မင်းလုပ်သမျှကြိုက်တယ် ၀၃။ လိုတရ ၀၄။ ကြင်နာချင်လွန်းလို့ ၀၅။ ဘယ်သွားနေလဲ ၀၆။ ကိုကိုနဲ့တွဲကလိုက်ချင် ၀၇။ အရယူမယ် ၀၈။ မခေါ်တော့ဘူး ၀၉။ စက်ရုပ် ၁၀။ အချစ်ည .. ကိုယ့်ည ၁၁။ ယုံတယ်ဟုတ် (+ငယ်ငယ်) ၁၂။ လူလည် (+ ငယ်ငယ် + ဘရိတ်ကီ) ၁၃။ ဘာကြောင့်တို့တွေ ဝေးရမှာလဲ ၁၄။ ဖြူဖြူစင်စင်ချစ် မှာလား
March 13, 2009 Snuo Mwoani ဘရိတ်ကီ အဆိုတော် (မ) တင့်တင့်ထွန်း Myanmar Artist3Comments
တင့်တင့်ထွန်း – နမ်းမှာလား ၂၄နာရီ
၀၁။ ပုဂံလမ်းကစောင့်နေမယ် ၀၂။ အဝေးကသီချင်း ၀၃။ ငိုချင်သလား ပျော်ချင်သလား ၀၄။ တောင်းဆိုခွင့်ရှိရင် ၀၅။ ရင်ထဲမှာ ၀၆။ အခြားတစ်ယောက်ဆီမှာလား ၀၇။ နှုတ်ဆက်အနမ်းများ ၀၈။ ကိုယ့်လူ + တင်ဇာမော် ၀၉။ ၂၄နာရီ ၁၀။ အိမ်မက်တွေကလန့်နိုးတိုင်း ၁၁။ ဝေးများဝေးရင် ၁၂။ နမ်းမှားလား ၁၃။ တောက်ပခဲ့တဲ့နေ့ရက်များ
March 10, 2009 koyazar အဆိုတော် (မ) အခွေ (တကိုယ်တော်) တင့်တင့်ထွန်း Myanmar Artist3Comments
၀၁။ အလွမ်းရုပ်ရှင် – ရာဇာနေ၀င်း ၀၂။ ကိုကိုယောက်ျားမဟုတ်ဘူး – တင့်တင့်ထွန်း ၀၃။ တမ်းတမိတယ် – လွင်မိုး ၀၄။ အနမ်းတစ်ခုရဲ့ဒိုင်ယာရီ – Rဇာနည် ၀၅။ တစ်ယောက်တည်းလွမ်း – ဇော်ဝင်းထွဋ် ၀၆။ တယ်လီဖုန်းလေး – ရှင်ဖုန်း ၀၇။ မင်းမရှိတဲ့ညတွေ – ရင်ဂို ၀၈။ မင်းရဲ့အိမ် – ချောစုခင် ၀၉။ ရာဇ၀င်ထဲမှာမေ – စည်သူလွင် ၁၀။ သ၀ဏ်လွှာ – ဂရေဟမ် ၁၁။ နောက်ဆုံးအသည်းကွဲခြင်း – ဘိုဘို ၁၂။ တစ်သက်လုံးအတွက် – ရတနာဦး
March 6, 2009 koyazar ဘိုဘို အဆိုတော် (ကျား) အဆိုတော် (မ) အခွေ (အများ) စည်သူလွင် ဂရေဟမ် ရာဇာနေ၀င်း ရှင်ဖုန်း ရတနာဦး ဇော်ဝင်းထွဋ် ချောစုခင် တင့်တင့်ထွန်း Rဇာနည် Leaveacomment
ဇော်ဝင်းထွဋ် ချစ်ကောင်း စည်သူလွင် ဂရေဟမ် အဲလက်စ် ဘရိတ်ကီ Rဇာနည် Kuramoto တင့်တင့်ထွန်း ချောစုခင် ဆုန်သင်းပါရ် ရှင်ဖုန်း (သီချင်းချစ်သူ ဂျပန်သံစဉ်မြန်မာသီချင်းများ)
၁။ အပေါင်းနဲ့ အနှုတ် ဇော်ဝင်းထွဋ် ၂။ စွန့် သွားတော့လေ ဆုန်သင်းပါရ် ၃။ အမုန်းသံကြားရင်ဖျားချင်တယ် Rဇာနည် ၄။ သီချင်းချစ်သူ အဲလက်စ် ၅။ အချစ်ဆိုတာ ရှင်ဖုန်း ၆။ မိုင်တိုင်များ ဇော်ဝင်းထွဋ် ၇။ ခြေရာ တင့်တင့်ထွန်း ၈။ ကလောမြို့ နဲ့ တူတဲ့အချစ် ချစ်ကောင်း ၉။ မိုးနဲ့ အတူငိုနေမယ် ချောစုခင်+ဘရိတ်ကီ ၁၀။ လမ်းခွဲပြီးနောက် ဂရေဟမ် ၁၁။ မင်းကိုချစ်တယ် စည်သူလွင် ၁၂။ မင်္ဂလာဆုတောင်း Kuramoto Rock ‘N’ Roll Never Die Download Link
February 3, 2009 ma pu ဘရိတ်ကီ အဲလက်စ် စည်သူလွင် ဂရေဟမ် ရှင်ဖုန်း ဆုန်သင်းပါရ် ဇော်ဝင်းထွဋ် ချောစုခင် တင့်တင့်ထွန်း ချစ်ကောင်း Rဇာနည်3Comments
၀၁။ လေထဲကသီချင်း – အဖွဲ့ ၀၂။ နှောင်ကြိုး – ဖြူဖြူကျော်သိန်း ၀၃။ မင်းမရှိတော့ (နှိုးစက်) – တင့်တင့်ထွန်း ၀၄။ ပိုလွမ်းတက်ပြီ – မေရီလင်း ၀၅။ ဘေဘီကတုံးမ – သျှားအိဘိုဘိုဟန် ၀၆။ ရင်ခုန်မိတိုင်း – ရတနာဦး ၀၇။ အချစ်တဲ့လား – ဟေမာနေ၀င်း ၀၈။ ကော်လာပေါ်ကနှုတ်ခမ်းနီ – ရတနာ ၀၉။ ချစ်မိမှရှုပ်ကုန်တယ် – မေမြတ်နိုးခင် ၁၀။ ချစ်မိသူ – သရဖီ ၁၁။ မီးညှောင် – ဖြူနှင်းပွင့်သွေး
November 4, 2008 ME *MMA* အဆိုတော် (မ) အခွေ (အများ) ရတနာ ရတနာဦး ဖြူနှင်းပွင့်သွေး ဖြူဖြူကျော်သိန်း မေရီလင်း မေမြတ်နိုးခင် ဟေမာနေ၀င်း တင့်တင့်ထွန်း သရဖီ Myanmar Artist3Comments
၁။ နွဲ့ယဉ်ဝင်း – ဒေါသစိတ်ကလေး ၃၆၀ မိနစ် ၂။ ခင်မောင်ထူး – ချစ်အယူခံ ၃။ မေခလာ – ကော်လာပေါ်ကနှုတ်ခန်းနီ ၄။ တူးတူး – ကေသရီ ၅။ တင့်တင့်ထွန်း – ပုဂံလမ်းကစောင့်နေမယ် ၆။ ပလေးဘွိုင်းသန်းနိုင် – ဆု ၇။ အယ်လ်ခွန်းရီ – အချစ်ပျက်က??? ၈။ အောင်ကိုလတ် – ခေါင်းလောင်းလေးတွေမြည်နေပြီ ၉။ နော်လီဇာ – မာလာဆောင်မောင်မလာ ၁၀။ ဗစ်တာခင်ညို – အနေခက်တယ် ၁၁။ မီမီဝင်းဖေ – မင်းကလွဲရင် ၁၂။ စိုးပိုင် – အနီးဆုံးလူ ၂ ၁၃။ ကော်နီ – တစိမ့်စိမ့်ရင်ထဲမယ်
October 26, 2008 Mad Computerist နွဲ့ယဉ်ဝင်း ဗစ်တာခင်ညို အခွေ (အများ) အယ်လ်ခွန်းရီ ကော်နီ မေခလာ တင့်တင့်ထွန်း ခင်မောင်ထူး တူးတူး မီမီဝင်းဖေ Myanmar Artist Playboy သန်းနိုင်6Comments